Accueil Ireo Sampana Antoko Mpihira Famerenan-kira 10-10-2015
“Mifalia mandrakariva amin’ ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia” Filipiana 4:4
Hiarahantsika rehetra mahafantatra tsara fa isika zanak’olombelona dia tsy mitsahatra mikaroka izay fomba hahitàntsika fifaliana. Tsapantsika koa anefa fa matetika dia diso ny toerana hanaovantsika izany fikarohana fifaliana izany ka tsy tsapa akory izay tena fifaliana hita.
Moa tsy taitra sy faly ery isika, rehafa mahita ny hatsaran-tarehy sy fanjelanjelatry ny firavaka “toc” ohatra, kanefa dia diso fanantenàna nony mahafantatra ny vidin’izany (valeur) firavaka izany avy eo ?
Fa ny fifaliana marina ho antsika zanak’olombelona, ny fifaliana izay mivoaka avy ao amin’ny fanahy lalim-paka aty anatintsika tsirairay avy, dia ho azontsika tovoizina ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany.
Raha toa ka somary malahelo ary isika androany, dia andeha hitodika amin’ilay hazo fijaliana tao Kalvary, andeha hitodika amin’Ilay nanatanteraka ny famonjena antsika tamin’ny fomba tsy azo kianina. Andeha isika handinika tsara ny hasarobidin’ny rà izay nalatsaka, mba hanalàna ny ota vitantsika. Andeha isika hanao ny fankasitrahana feno an’I Kristy izay : fahendrena ho antsika, fahamarinana ho antsika, fahamasinana ho antsika, ary indrindra indrindra, famonjena antsika.
Koa satria efa afaka tokoa ny fahotantsika, ny fanatenantsika hihaona indray amin’i Kristy rahatrizay rehefa hitsahatra ny ady mafy rehetra atrehantsika eto amin’izao tontolo izao izay lalovantsika, izany fanantenàna izany dia loharanom-pifaliana tokoa ao anatintsika tsirairay avy.
Aoka ary hifaly hatrany ao amin’i Kristy isika, ary dia ho hita sy ho tsapan’izao tontolo izao tokoa anie izany fifaliantsika izany, ho voninahitr’Andriamanitra.